Lalana iray izay mampifandray an`i Soanierana Capsat sy eo anoloan` ny Antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza no nanaovan`ireo olona ireto ny asa ratsiny. Ny iray nanakenda, ny roa kosa nisava sy naka ireo entana teny amin`ilay rangahy. Very avokoa ny entana toy ny fakan-tsary, ny antontan-taratasy… teny aminy. Vao vitan`izy ireo ny asa ratsiny dia nirifatra nihazo ny lalana mivoaka eny amin`ny manodidina ny toby miaramilan`ny Capsat ry zalahy. Niantso vonjy ilay niharam-boina. Nisy olona iray mba nanampy azy hanenjika ireto jiolahy saingy tsy hita ireto farany rehefa tonga teo amin`ny tsena Soanierana. Tsy mifidy intsony ny jiolahy amin`izao. Ny tena nahavariana dia nisy ireo polisy sy miaramila nanao ny fisafoana teny amin`ny manodidina fa tsy naharaka izay nitranga. Lalana mampitaraina ny maro io lalana io. Anarany mba akaiky andrimpanjakana sy toby miaramila, hoy ireo fanehoan-kevitra, kanefa vao mainka mampihorohoro ny mpandalo sy mpiara-monina.